यी हुन् मुड फ्रेस गर्ने खानेकुरा | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
यी हुन् मुड फ्रेस गर्ने खानेकुरा
प्रकाशित मिति ९ जेष्ठ २०७५, बुधबार २०:४० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । कहिलेकाँही कुनै घटना परिस्थिति तथा वाध्यता पछि मानिसको मन भौतारिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मन एउटै कुरामा घुमाई रहनुहुँदैन । बरु मन परिवर्तन गर्नुपर्छ, कुनै नराम्रो अनुभव मनमा लिईरहँदा हाम्रो मष्तिष्कमा समेत असर पु¥याउँछ । शरीर तात्छ, मुटुको धडकन बढ्छ र छटपटि हुन्छ । त्यसैले अनावश्यक कुरामा एकोहोरो गहिरो सोचाई नगर्ने ।
१.अर्काको उपलब्धिलाई सजिलै ग्रहण गर्ने र खुसी हुने । हामी हाम्रो प्रगति चाहन्छौं, यो राम्रो पक्ष हो । तर हामीमा केही गलत धारणा पनि रहन सक्छ । अर्काले प्रगति गर्दा आफूलाई नकारात्मक मुल्यांकन गर्ने बानी असाध्यै नराम्रो हो । त्यसैले मनलाई ठुलो पार्नुपर्छ, संकिर्ण पार्नु हुदैन । धेरै मानिस यस्ता समस्याबाट पिरोलिएका हुन सक्छन् । जसले गर्दा मनमा अशान्ति फैलन्छ, हामीलाई मनोरोग लाग्न सक्छ । हामी आफूभन्दा सानालाई कसरी सहयोग गर्ने र आफूसरहको प्रगतिमा साथ दिनुपर्छ, नकि आफूलाई अबमूल्यन गर्ने होईन ।
मुड फ्रेश बनाउने १० खानेकुरा
मानिसको मुड फ्रेश बनाउने र सधै खुशी राख्ने हार्मोनको नाम हो सेरेटोनिन हार्मोन । यो हार्मोनको सक्रियता बढाउनको लागि हामीले खाने कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ । यदि हामीले खुसी दिने खाने कुराहरु दिनहुँ प्रयोग गर्यौँ भने हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि खुशी रहन्छौँ । खुशी हुनको लागि हामीले पोटाशियम, म्याग्नेशियम, र फलिक एसिडको मात्रा धेरै भएका खानेकुराहरु खाने गर्नुपर्छ । आज हामी तपाईँलाई खुशी बनाउने १० खाने कुराहरुको बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
केरा–यसमा हुने पोटाशियम, म्याग्नेशियमका साथै प्रोबायोटिक, भिटामिन बी ६, ट्रायप्टोफेन र आइरनले हाम्रो मुड फ्रेश राख्न मद्दत गर्छ । यसका साथै हामीलाई खुशी राख्न पनि यी तत्वहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् ।
डार्क चक्लेट– केफिन, कोको र सुगरले भरपूर डार्क चक्लेटले हाम्रो शरीरको ईनर्जी बुस्ट गर्छ । जसले गर्दा हाम्रो मुड फ्रेश रहन्छ । यसले हामीलाई खुशी पनि गराउँछ ।
होल ग्रेन्स–यसमा हुने कार्बोहाइड्रेट्सले मानिसलाई खुशी बनाउने हार्मोनलाई ब्यालेन्स राख्छ ।
रातो मुला–यसमा रहेको फलिक एसिड र बिटेन नामको तत्वले ब्रेनमा सेरोटोनिन हार्मोन बढाएर स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ ।
अण्डा–ओमेगा ३, फ्याट्टी एसिड,जिंक, भिटामिन्स र प्रोटीनले भरपूर अण्डाले हामीलाई मानसिक रुपमा स्वस्थ राख्छ ।
रातो डल्ले खुर्सानी –यसमा भिटामिन सी र भिटामीन ए धेरै हुन्छ । जसले हाम्रो मुड फ्रेश बनाउँछ र हामीलाई खुशी दिन्छ ।
नरिवल–नरिवलमा हुने ईलेक्ट्रोलाईट्सले शरीर र दिमागलाई हाइड्रेड राख्छ र हामीलाई खुशी बनाउँछ ।
पालक–पालकमा हुने आइरनले थकान र कमजोरी हुन दिँदैन । यसले डिप्रेशन र तनावबाट पनि बचाउँछ ।
मह–यसमा हुने एंटी इन्फ्लेमेटरीले दिमागलाई स्वस्थ राख्छ । यसका साथै यसले डिप्रेशनबाट पनि टाढै राख्दछ ।
सिमी–म्याग्नेशियमले भरपूर सिमीले खुशी बढाउने हार्मोनलाई सक्रिय बनाउँछ । सिमी एन्टी अक्सीडेन्ट्स र न्युट्रिएट्सले पनि भरपूर हुन्छ ।
एचआइभी र यौनरोगबाट कसरी बच्छन् पोर्नस्टार ?
पोर्न फिल्ममा काम गर्ने अभिनेताहरुलाई यौनरोग तथा एचआइभी एड्सको ठूलो जोखिम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु यस्ता संक्रमणबाट कसरी…
पक्राउ परेका प्रकाण्डले भने, ‘चरम मानसिक यातना दिइएको छ’
काठमाडाैं । मंगलबार पक्राउ परेका नेकपाका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) ले सरकारले राजनीति गरेकै कारण आफूलाई…
बालकोटमा ओली-प्रचण्ड भेट: ओली थाइल्याण्ड जानुअघि नै एमाले माओवादी एकता प्रक्रियाको काम अघि बढ्ने !
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले र…
रवि लामिछाने समर्थकको प्रदर्शनमा नेकपाको आपत्ति
चितवन । पत्रकार रवि लामिछानेको समर्थनमा भएको प्रदर्शनप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को चितवन जिल्ला समितिले आपत्ति जनाएको छ…
बिजुलीमा भारतसितको परनिर्भता बर्सेनि बढ्दै, लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट ४ सय ७० मेगावाट बिजुली आयात !
काठमाडौं । बिजुलीमा भारतसितको परनिर्भता बर्सेनि बढ्दै गएको छ । विद्युत प्रधिकरणले…
पाकिस्तानद्वारा ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण
काठमाडौं । जम्मू-कश्मीर मुद्दामा भारतसँग विवाद बढिरहेको बेला पाकिस्तानले ‘गजनबी’ नामक ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ ।
भारतले संविधानको धारा…